Georginio Wijnaldum Oo Sharraxay Sababta Uu Uga Cadhoodho Kabtan Jordan Henderson Xilliyada Ay Garoonka Ku Jiraan - Gool24.Net
Georginio Wijnaldum Oo Sharraxay Sababta Uu Uga Cadhoodho Kabtan Jordan Henderson Xilliyada Ay Garoonka Ku Jiraan
Xiddiga Liverpool khadka dhexe uga ciyaara ee Georginio Wijnaldum ayaa sheegay inuu ka cadhoodo kabtanka kooxdiisa ee Jordan Henderson, kaas oo uu xusay inuu sameeyo in waxyaabaha uu ciyaartoyda ku dhiirigeliyo garoonka gudihiisa ay mararka qaarkood sababi karaan in laga xanaaqo.
Georginio Wijnaldum oo ka mid ahaa saxeexyadii ugu horreeyey ee Jurgen Klopp uu sameeyey xagaagii 2016, xilligaasna waxa uu Henderson sii joogay Anfield muddo shan sannadood ah, taas oo ka dhigan inuu kaga waayo aragsan yahay, doorkiisa hoggaaminta ee uu kooxda ku leeyahayna tahay mid macquul ah.
Henderson oo ka hor intii aanu Liverpool ku biirin u ciyaari jiray Sunderland, waxa uu ka mid yahay murashaxiinta abaal-marinta laacibta ugu fiican sannadka ee PFA u tartamaysa, waxaana ciyaartiisa ka sokow uu Anfield muhiim ugu yahay qaabka uu gudaha garoonka ugu maamulo ciyaartoyda.
Georginio Wijnaldum oo ay khadka dhexe ka wada ciyaaraan, ayaa sheegay in Henderson uu sameeyo dhiirigelin badan oo mararka qaarkood ku keenta inuu cadhoodo, waxaanu yidhi: “Waxaan la ciyaarayay sannado yar oo uu muujinayey hoggaamin wanaagsan. Waa inaan idhaahdo, Kevin Strootman iyo Jordan Henderson waxay ahaayeen, kuwo ka sarreeya kabtannada kale.
“Mark Van Bommel ayaa sidoo kale ahaa hoggaamiye wanaagsan iyo kabtan fiican, laakiin saddexdooda, waxaan dooranayaa Henderson.
“Way kaa cadhaysiin karaysaa marka uu gudaha garoonka ciyaartoyda dhiirigelinayo, laakiin haddii aad ka fikirto sababta uu sidaas u samaynayo, kaliya waa inuu kuu caawinayo shaqsi ahaan iyo koox ahaanba.
“Sidaa darteed, haddii aad sidaa u fikirto, mar walba waad qiimaynaysaa, sidaas ayaananu ugu faraxsanahay Henderson.”
Georginio Wijnaldum waxa kale oo uu amaanay James Milner oo uu ku tilmaamay laacib aan istaagin oo aad dhibaato badan ka marayso marka aad kasoo hor-jeeddo, waxaanu yidhi: “Mishiinkiisu maaha mid la malayn karayo. Waxaan ku arkaa ciyaaraha dhexdooda iyo garoonka tababarka, sida uu u ciyaaro iyo sida uu taamka u yahay, waxaan rajaynayaa inaan heerkaas gaadhi doono. Maba istaagayo isagu.
“Waa inaan sheego in marka aad ciyaar iskaga hor timaaddaan, in ay dhab ahaan adag tahay, sababtoo ah, Milner waa nooc ciyaartoy oo aan marna istaagaynin wax walbana samaynaya, markaa waa inaad boqolkiiba boqol dareenkaagu soo jeedo, mar walbana aad u diyaarsanaato boqolkiiba boqol, haddii kale waad guul-darraysanaysaa.
“Dhab ahaantii waa tartame adag.”